शेखर, प्रकाशमान र गगनबीच समीकरण! :: Setopati
अमित ढकाल असोज २७
यो शृंखलाको भाग-१ मा म देउवाइतर समूहको अहिलेको 'डाइनामिक्स' केलाउनेछु।
पहिलो, तेह्रौं महाधिवेशनमा उनले केन्द्रीय सदस्यमध्ये सबभन्दा धेरै भोट ल्याए। त्यसले उनलाई 'म लोकप्रिय रहेछु, कार्यकर्ताले मलाई रूचाउने रहेछन्' भन्ने आत्मविश्वास दियो।
दोस्रो, उनले तेह्रौं महाधिवेशनमै महामन्त्री उठ्न खोजेका थिए। भाइ शशांकलाई ठाउँ छोडिदिन मनाउने धेरै प्रयत्न पनि गरे। महामन्त्रीका रूपमा पार्टी चलाउन धेरै मिहेनत गर्नु पर्ने, निरन्तर देशभरि डुल्नु पर्ने, हरदम सक्रिय रहनु पर्ने भएकाले त्यो काम तिम्रो स्वाभाव अनुसार मिल्दैन भनेर शशांकलाई सम्झाए। महामन्त्रीका रूपमा 'सानोबुवा' गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियता सम्झाए।
शेखर पछि हटे। त्यो बेला निकटहरूसँग चित्त दुखाउँदै उनले भने, 'म बिपीको छोरा परिनँ। त्याग मैले नै गर्नुपर्‍यो।'
सहरमा नेताहरूबीचको मोलाहिजा छाडेर शेखर गाउँ पस्नुको कारण छ। काठमाडौंमा कांग्रेस शीर्ष नेताहरू उनलाई 'जुनियर' भन्छन्। उनी सक्रिय राजनीतिमा धेरै पछि आए। विराटनगरमा २०४८ साल देखिनै सानोबुवा गिरिजाको निर्वाचन क्षेत्रमा खटिए पनि उनी प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएनन्। धरानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएपछि गिरिजाले त्यसको नेतृत्व गर्न शेखरलाई पठाए। उनले उपकुलपतिका रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरे। त्यसपछि गिरिजाप्रसादले एघारौं महाधिवेशनमा आफू तेस्रो पटक सभापति निर्वाचित भएपछि उनलाई २०६२ सालमा केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसजस्तो 'हाइयार्की' मान्ने 'कन्जर्भेटिभ' पार्टीमा सभापतिका आकांक्षी अरू नेताले शेखरलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिने कुरै थिएन। त्यसैले सभापतिमा बलियो प्रतिस्पर्धीको हैसियत आर्जन गर्न शेखर तेह्रौं महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै जिल्ला घुम्न सुरू गरे। कोरोना संक्रमण सुरू भएका केही महिना पनि उनी जिल्ला दौडमा व्यस्त थिए।
शेखरको दाबेदारी बलियो बन्नुमा शंशाक कोइराला पनि कारक बेनेका छन्। अहिले सभापतिको दौडमा भएका कुनै पनि आकांक्षीको जति राजनीतिक सुझबुझ र सक्रियता शशांकमा हुन्थ्यो भने चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिको कुर्सीमा कसैले आँखा लगाउन सक्थेन। बा बिपीको 'लिगेसी'मा उनको आफ्नो क्षमता मिसिँदा सभापति बन्न उनलाई देउवा वा अरू कसैले रोक्न सक्ने थिएन।
तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका पछिल्ला १५ वर्ष उनले आफ्नो नाकामीमात्र प्रमाणित गरे। उनी तीन पटक सांसद निर्वाचित भइसकेका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि पार्टीको निर्वाचित महामन्त्री छन्। तर उनी 'कहीँ छैनन्'।
शशांकलाई महामन्त्रीमा भोट दिएका नेता-कार्यकर्तामात्र होइन, उनीनिकट रहेर काम गरिरहेका केन्द्रीयस्तरका नेता नै 'अफ-द-रेकर्ड' कुराकानीमा शशांकले पार्टी पार लगाउन नसक्ने बताउँछन्।
'पार्टी नेतृत्व गर्नेमात्र कुरा छैन, आउने राष्ट्रिय निर्वाचनमा शक्तिशाली नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुछ,' शशांक नजिककै एक नेता भन्छन्, 'शशांकसँग त्यसका लागि ऊर्जा छैन। राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने जाँगर र क्षमता छैन।'
पार्टी राजनीतिमा शेखरको एउटा 'भल्नरएबिलिटी' (कमजोरी) भने छ। अरू नेताको जस्तो उनीसँग लामो समयदेखिको स्थायी गुट छैन। गुट भनेको उकाली-ओरालीमा नेतालाई साथ दिने नेता-कार्यकर्ताको पंक्ति हो। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले गुट बनाउँछन् अनि गुटले नेता पनि बनाउँछन्। गुटविहीन राजनीति नेपालका सन्दर्भमा कमै राजनीतिज्ञले गरेका छन्।
उनीप्रतिको अहिलेको आकर्षण नै सम्भावनाको आकर्षण हो। शशांकको अक्षमताले कोइराला परिवारको अर्को सदस्यका लागि जन्मिएको सम्भावना। शेखरले पाँच वर्ष मिहेनत गरेर आफ्नै लागि जन्माएको सम्भावना। सरकारमा कहिल्यै नगएका शेखरको 'फ्रेस' नेतृत्वमा कांग्रेसका लागि भोलिको सम्भावना।
युवाहरू उनीप्रति आकर्षित हुनुको अर्को कारण पनि छ। उनले प्रष्ट भनेका छन्, 'म एक अवधिका लागिमात्र सभापतिमा लड्ने हो।'
अर्को महाधिवेशनमा गगन थापाको पुस्तालाई कांग्रेसको नेतृत्व छाडेर राजनीतिबाट विश्राम लिने शेखरले प्रष्टै भन्दै आएका छन्। एक युवा नेता भन्छन्, 'शेखरसँगै पुरानो पुस्ता बिदा हुन्छ भन्ने सम्भावनाले पनि हामीलाई उत्साही बनाएको छ।'
शेखरको यो भनाइ र पन्ध्रौं महाधिवेशनमा गगन थापा सभापति उठ्ने सम्भावनाले कांग्रेस पार्टीभित्र अहिले नयाँ 'डाइनामिक्स' निर्माण गरेको छ। अघिल्लो पुस्ताका धेरैले आफू सभापति हुने अन्तिम अवसर यही हो भन्ठानेका छन्।
'कांग्रेसको शीर्ष तहमा आफ्नो स्थान कसरी सुरक्षित गर्ने, आफू कसरी सान्दर्भिक बनिरहने भन्ने उहाँको मुख्य चासो हुन सक्छ,' सिटौलालाई नजिकबाट चिन्ने एक नेता भन्छन्। उनको विश्लेषणमा सिटौला काम गर्ने क्षमता भएका एक चतुर नेता हुन् जसले भोलिको कांग्रेसमा पनि आफ्नो भूमिका खोजेका छन्।
'अब मेरो समय सकियो भनेर पाखा लाग्ने नेता उनी हैनन्,' उनी भन्छन्।
अन्तिममा उनले भने, 'तिमीहरू सबै मिलेर सभापतिका लागि एक जनाको नाममा सहमति गर्यौ भने म पनि मानौंला।'
शेखरले प्रकाशमानलाई भेटेर प्रष्ट भाषामा दुबै मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'कांग्रेसमा बिपीकै पालादेखिको एउटा मूल समस्या भनेको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनु हो। त्यो समस्याको हल हामीले निकाल्नुपर्छ।'
आफूनिकट युवा र अरूलाई पनि शेखरले भनेका छन्, 'मलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै लोभ छैन।'
'प्रकाशमानको दाबी नाजायज छैन। तर सभापति जित्न उनलाई भन्दा शेखरलाई सजिलो छ,' दुबै मिल्नुपर्ने पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीले चुनाव जित्यो र उहाँ कुनै दिन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने गणेशमानले छाड्नुभएको त्यो पदमाथि पनि न्याय हुनेछ।'
प्रकाशमानले शेखरलाई 'म सभापति लड्छु, पार्टीले चुनाव जिते तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्' भन्ने प्रस्ताव गरे के हुन्छ?
शेखरनजिक एक नेता भन्छन्, 'प्रकाशमानले अहिलेसम्म त्यसो भन्नुभएको छैन, भोलि पनि भन्नुहुन्न। उहाँलाई शेखरको प्रस्तावको अन्तर्य के हो भन्ने थाहा छ। सही निर्णय के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ।'
पछिल्ला दिनमा शेखर र शशांकबीच दूरी बढ्दै गएको छ। शशांकको कमजोर नेतृत्वकै कारण कांग्रेसमा शेखरको सम्भावना बढेको हो। तर सभापतिमा आफ्नो दाबी कमजोर हुनुमा शशांक शेखरको हात देख्छन्। 'शशांकले पार्टी हाँक्न सक्दैनन् भन्ने' सन्देश देशभर पुर्‍याउने काम दाइ शेखरले नै गरेको उनको ठम्याइ छ। त्यसले शशांकलाई क्षुब्ध बनाएको छ।
'शेखर, प्रकाशमान र गगनबीच समीकरणको सम्भावना जसरी बलियो बन्दै गएको छ, देउवाइतर समूहको उम्मेदवारीमा त्यो नै निर्णायक हुने देख्दैछु म,' यो समीकरणलाई नजिकबाट हेरेका एक नेता भन्छन्, 'त्यसले शशांकलाई पनि अन्तत: तान्नेछ।'